फिटनेस Archives - बडिमालिका खबर
सुरक्षा सुवेदी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र आवश्यक सावधानी अपनाउन विश्वका धेरै मुलुक लगायत नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन बढाएको छ। लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यकिन छैन। लकडाउनका कारण बालबालिकाहरु घरमै थन्किएका छन्। उनीहरुलाई दिन काट्न गाह्रो परिरहेको छ। यस्तो समयमा आमाबाबुको उचित हेरचाह नपुग्दा बालबालिकामा मोटोपनको समस्या झन् बढ्दै जान्छ। कालान्तरमा यसको प्रभाव नकारात्मक हुन […]
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ
पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट ? समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन् । महिलामा भएका यस्ता गुण, क्षमता एवं विशेषताले […]
नेपालीको पर्व दशैँ, तिहारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्ने भएका छन् । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दशैं र तिहारका सार्वजनिक बिदाका समयमा पनि स्वास्थ्यसेवा यथावत् राख्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जगतप्रसाद भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय निकायका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्वास्थ्यसेवा यथावत् […]
भनिन्छ, श्रीमान्-श्रीमतीको झगडा परालको आगो । जति छिट्टो परालमा आगो लाग्छ, त्यति नै छिट्टो निभ्छ पनि । त्यस्तै श्रीमान्-श्रीमतीको झगडा पनि छिट्टो हुन्छ र मेलमिलाप पनि छिटो नै हुन्छ । यो सम्बन्ध नै त्यस्तै हो, स-साना झगडाका कारण माया-प्रेम झन्-झन् बढ्ने । दाम्पत्य जीवनमा स-साना झगडा भएन भने त्यो दामपत्य जीवन नै निरश हुन्छ । […]
प्राचिन पुर्विय दर्शनमध्य सामुन्द्रिक शास्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो । जसले मानिसको शरीरको प्रत्येक अंगको आकार प्रकारको आधारमा उसको आचरण, स्वभाव, व्यवहार, भविष्य आदिबारे जानकारी गराउँदछ। साथै मानिसको शिरदेखि पाउसम्मका हरेक अंग विशेष लक्षणको हुने र ती अंगहरुबाट मानिसको गुण पहिल्याउन सक्ने हुन्छ। हिन्दू शास्त्र अनुसार महिलाहरु लाई घरमा लक्ष्मीको दर्जा दिईने गर्छ । महिलाहरु […]
तिज मेकअप टिप्स – बरिष्ट सौन्दर्यबिद रश्मिला श्रेष्ठ
ब्युटी टिप्स: रष्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड ब्युटी केयर काठमाडौँ : तीज भन्नासाथ हिजोआज एकदमै ट्रेन्डी र फेसनेबल सोच आइहाल्छ । महिलाहरू डिजाइनर पहिरनका साथ आफूलाई सुहाउने मेकअपमा सिंगारिन चाहन्छन् । तीजमा ट्रेन्डी मेकअप तर ब्राइट देखिने हल्का मेकअपमै सुन्दर देखिन सकिन्छ । हेभी मेकअपले आफूलाई मात्र होइन हेर्नेलाई समेत गार्‍हो हुन्छ । तीजका बेला व्रत […]
यसरी बढाउन सकिन्छ बालबालिकाको स्मरणशक्ति
मोबाइल र ल्यापटपले हिजोआजका बालबालिकाहरुलाई पुर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । बालबालिकाहरु मोबाइल र ल्यापटप भएपछि खान-पिउन, साथीभाई, आमाबुबा कसैको पनि सम्झना आउँदैन, कुनै कुराको पनि होस हुँदैन । आफ्न्त कहाँ जाँदा होस् अथवा कुनै नौलो ठाउँमा पुग्दा होस्, उनीहरुलाई कुनै पनि कुराको मतलब हुँदैन । केवल मोबाइल तथा ल्यापटप भएमात्र उनीहरु खुशी हुन्छन् । […]
आफ्नो जीवनभरी स्वस्थ तथा निरोगी रहनु हरेक व्यक्तिको चाहना हो । स्वस्थ र निरोगी रहनका लागि हरेक व्यक्तिले उचित मात्रामा सबै प्रकारका भिटामिनहरु सेवन गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षे त्रमा करिव २० प्रकारका भिटामिनहरुको बारेमा अनुसन्धान भैरहेको छ । यद्यपि, ती मध्ये भिटामिन ए, बी, सी, डी तथा के चलनचल्तिमा छन् । यी मध्ये […]
काठमाडौं– ॐ अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरमा नेपालमा पहिलोपटक मृगौलाको ट्युमरको उपचार गर्न माइक्रोवेभ एब्लेशन प्रोसिडियोर गरिएको छ । ॐ अस्पतालका इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिष्ट डा. अजित थापाले आइसियु तथा एनेस्थेसिया बिभागका डाक्टरहरुसँगको सहकार्यमा पोखराको लेखनाथ नगरपालिकाका दशरथ बरालको उपचारमा माइक्रोवेभ एब्लेशन गरे । उनको दाहिने मृगौलाको तल्लो भागमा रहेको ३ सेन्टिमिटर भन्दा लामो रेनल सेल कार्सिनोमा ट्युमरको […]
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आज अङ्गदान गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले आज मृत्यु पश्चात मृगौला, मुटु, फोक्सो, कलोजो, प्याङक्रियाज, सानो आन्द्रा अङ्ग दान गरेका हुन् । उमेरले ५८ वर्ष पुगेका ज्ञवालीको यी ६ अङ्ग मृत्यु पश्चात आवश्यक भएको जुनसुकै बिरामी व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि अङ्गदान गर्ने […]
गत हप्ता ट्वीटरमा ट्रेन्ड गरिरहेको #अर्गेजमइनइक्वालिटी ह्यासट्यागले ध्यान खिच्यो । कण्डम बनाउने एक कम्पनीले सुरु गरेको ‘अर्गेजम इनइक्वालिटी’ (चरमसुखमा असमानता) अभियानमा आफ्नो हालैको बयानका कारण भारतीय अभिनेत्री स्वरा भास्कर विवादमा आइन् । तर यो मामलाले भारतमा महिलाको यौन स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न तेर्सिए । वास्तवमा ‘अर्गेजम इनइक्वालिटी’ माथि कुरा गर्दै स्वराले एक […]
आँखा अघिल्तर दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनाग्रस्त मान्छे छटपटाउँछ, चिच्याउँछ, सहयोगको याचना गर्छ । तर, यस्तो अवस्थामा सहयोगको हात बढाउनेहरु कति हुन्छन् ? भर्खरै मात्र बाढी-पहिरोले धेरै जनधनको क्षति पुर्‍यायो । सामाजिक सञ्जालभरी पानीमा पीडा भोग्नेहरुको दृश्य देखिन्छ । एक किसानको भैंसी बगाइरहेको छ । ति बृद्ध किसान त्यत्तीका भेलमा पसेर भैंसी जोगाउने प्रयत्नमा छन् । […]
घरपछि कर्यथलो अर्थात अफिस एउटा त्यस्तो स्थान हो, जहाँ तपाई सबैभन्दा बढि समय बिताउनु हून्छ । त्यसैले तपाइर्ं आफ्नो अफिसका सहकर्मीहरुसँग पनि सकारात्मक हुनु आवश्यक छ । तपाई कुनै अफिसमा काम गर्न थालेपछि त्यहाँ तपाईको कोहि न कोहिसंग राम्रो मित्रता हुन्छ । उसलाई तपाई आफ्ना सबै कुराहरु शेयर गर्न थाल्नुहुन्छ । उसलाई घर र अफिस […]